Cimilada: War-Hordhac Bogga Ammaanka
Haddii ay jiraan wax ay dadku wax ka baran karaan sanadka 2016, waa sida ay naftooda u ilaalin karaanka soo jiidashada hacker. Marka la eego wacyi gelinta wacyiga, Frank Abagnale, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka Sare, wuxuu soo koobay todoba kamid ah wararka ugu sarreeya sanadkaan.
Hal weerar oo daneyn gaar ah waa khariidadda Dropbox, oo saameyn weyn ku lehdadka isticmaala - oculus espelhado vermelho. Waxay keentay in hoos loo dhigo warbaahin badan maaddaama ay jireen malaayiin xisaab-celin oo la isticmaalo. Waa dhacdo muujinayabaahida muhiimka ah ee dadku u adeegsanayaan furaha ereyada adag iyo kuwa gaarka ah, iyo olole ay ku hubineyso shirkadaha inay shuruudahaas u gudbiyaan macaamiishooda.
2. Nidaamka DDoS ee DNS
Dyn ah waa bixiye DNS ah oo ku dhacay dhibane si ay u jabiyaan 21kii Oktoobar ee sannadka 2016. Waxaa la sameeyey iyada oo la isticmaalayoa Mirae botnet waxay caadi ahaan ka shaqeysaa aaladaha IoT taas oo keentay wakhti dhimista website-yada waaweyn. Wax qarsoodi ah maahan in ciyaalku bartilmaameedsado qalabka IoTsababtoo ah dhibaatooyinkooda kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, hal shay oo ay isticmaalayaashu ka barteen dhacdadani waa sida ay IoT ammaan u noqon karto marka la galogacmaha qaldan.
3. Sharciga awoodaha baaritaanka UK
Boqortooyada Ingiriisku waxay soo saartay mid ka mid ah biilasha ugu murugada badan, oo ah Qodobbada Baaritaanka Awoodahawuxuu kordhiyaa baaxadda ilaalinta ee magaca argaggixisada iyo xoojinta amniga. Wakaaladda IT-ga hadda waxay heli kartaa qoraallada isticmaalahaiyada oo aan loo baahnayn amar, sababtoo ah waxay ku sii jirayaan nidaamka laba iyo toban bilood. Arrinta ayaa ku dooday doodaha ku saabsan jeegaga dawladdaiyo balances..Waxay sidoo kale su'aalo u gudbinayaan ilaa inta ay xukunka xukunka ku jiraan sida mabaadii'da gaarka ah.
Cryptocurrency waxay bilowday in ay hesho baaritaanka amniga ballaaran ka dib markii ay jabhadayaashu heleen gelitaankaBitfinex isweydaarsiga. Inkasta oo shirkadku ay magdhawaan isticmaalayaashooda, haddana dadku waxay bilaabeen dib-u-eegista go'aanka lagu maal-galiyo Bitcoins ilaa noocyada noocan ahis-weydaarsiga nugul marna ma bixiyo magdhow. Mawduucani ma aha mid gebi ahaanba ka baxaya kaynta, hase yeeshee dawladaha iyo bangiyada ayaa bilaabay inay is dejiyaanfikradda ah in la isticmaalo bacco sida macnaheedu yahay is dhaafsiga lacagta ee 2017.
5. Cadaadiska Caddaanka
Dirty COW Exploit waa mid nugul ee Kernel ee kumbuyuutarka kaas oo u ogolaanaya qalabka hackers inay helaanmudnaanta maamul ee kombiyuutarka ugu yaraan shan ilbiriqsi. Linus Torvalds waxay sheegtay inay si fiican u ogyihiin jiritaanka iyoisku dayay in la xaliyo toban sano ka hor. Waxay u adeegtaa sida tusaale ahaan jiritaanka nidaamyada jirdil ee jiritaanka sida dayacmoodka ugu muhiimsan ee casriga ahaduunka oo idil, oo hubiya ilaalinta joogtada ah ee nidaamka nabadgelyada.
Sanadka 2016-ka ayaa kor u kacay weerarada madax furashada. Waxay bartilmaameedsadeen noocyo kala duwanUrurada, bixinta caddayn cad oo aan cidna ka dhaafin weerarrada ransomware. Kor u qaadida wacyigelinta tallaabooyinka ka hortagga, iyo amnigawaa siyaabo dhowr ah oo looga hortagi karo dadka isticmaala ransomware mustaqbalka.
DARPA Grand Challenge by DARPA waxaa loola jeedaa in lagu martiqaado kooxo si ay u tiriyaan nidaamkanugul. Caqabadahaasi waxay leeyihiin isdhexgalin bini aadaminimo oo aad u yar iyada oo ay badanaa si toos ah u shaqeynayaan
mustaqbalka Nabadgelyada Nabadgelyada ee 2017
Ma jiro wax sheegaya waxa dhacaya 2017. Hase yeeshee, jilayaasha waxay ku sii jirayaan fiirintanugul badan. Hackers ayaa horay u sii wadi kara weerarkooda si ay u beegsadaan shabakadaha shabakada, iyo waxyaabo kale oo ficil ah iyo isticmaalida tifaftiran heer sare ahhalkaas. Waxyaabaha wanaagsan ayaa ah in waxyaabaha ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee la sameeyo sannadka 2017, waa wacyiga ammaanka.